प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा के छ ? :: The First Nepali Magazine Published in Australia
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा के छ ?
काठमाडौं— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई प्रयोगशाला बनाउन नदिने दावीप् गर्नु भएको छ । नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा मंंगलबार साँझ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो दावी गर्नु भएको हो ।
‘अहिलेसम्म नेपाललाई प्रयोगशाला बनाइयो, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ—‘अब त्यस्तो बन्न दिँदैनौं, प्रयोगशाला भएका कारण मुलुक विकास हुन सकेन ।’ नेपाल विभिन्न जातजाती, भाषाभाषी, धर्म, संस्कृती भएको मुलुक भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म यसका नाममा विभिन्न आन्दोलनहरु भए र नेपाललाई प्रयोगशाला बनाइएकोले पछि धकेलिएको बताउनु भयो ।
जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिबाट संविधान बनेकाले विभिन्न जातजातीका नाममा आन्दोलन गरेर देशलाई प्रयोगशाला बनाउन नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । आफ्ना असन्तुष्टिलाई वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा थियो । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा बन्द–हडताल बन्द गरी सार्थक वार्ताका माध्यमबाट निष्कर्ष निकाल्न समेत आग्रह गर्नु भयो ।